> Resource > Video > Video Editor for Windows 8: Edit iyo shakhsiyeeyo Videos
Barnaamijyada Video-tafatirka u dhaxaysaa in adayga ka laylis si xirfad leh, si aad u hesho software saxda ah si ay u daboolaan baahiyaha iyo heerka xirfada waa furaha. Haddii aad la casriyeeyay habka ay u Windows 8, oo hore Video editor iska joojiso ka shaqeeya OS cusub, aad u yimaadeen inay meel sax ah. Hubi tutorial video ku saabsan sida loo edit videos on Windows 8 hore oo kale.
In this article, xirfad leh oo si sahlan loo isticmaali editor Video for Windows 8 - Wondershare Video Editor (Windows 8/7 / XP / Vista taageeray) waxaa la wadaago aad la. Sidaa daraadeed, waxaad samayn kartaa funny iyo dhammaan kuwa laga cabsado videos la maalgelinta waqti yaraan iyo si toos ah, kuwaas oo la wadaagto qof. Plus, waxay bixisaa maxkamadda lacag la'aan ah si aad u qiimeeyaan. Just download maxkamadda lacag la'aan ah oo la raaco hoos ku tallaabo hagitaan talaabo talaabo.
Fiiro gaar ah: Video editor for Windows 8 taageertaa tiro balaadhan oo ah videos, Cajalado, iyo sawirro, arki Creech casriga ah ay halkan.
Talaabada 1: dejinta ilaha videos galay ay interface dareen
Video editor daaqadaha 8 waa u fududahay ah si ay u isticmaalaan video software tafatirka u PC Timid interface ogaado. Waxay bixisaa album User ah ayaa si aad u maareyso ku daray videos, Cajalado, iyo sawiro istareexsan. Hadda waxaad u timid inaad suuqa kala barnaamijka, kaliya dejinta in ay doortaan files ka your computer ama si toos ah jiidi oo hoos u files si User ee Album. Barnaamijkan wuxuu taageeraa Dufcaddii soo degida markii lagu badbaadinayo.
Talaabada 2: Edit iyo shakhsiyeeyo aad videos
Darsamaan, goo, Split, yaree videos
Jiid videos ee saxaarad item in Timeline Video ah, ay si toos ah u wada midowdo doonaa iyada oo aan joogsi kasta. Falaarta ku laayeen midig ama bidix ee video clip ah oo ku saabsan Timeline, markii a "arrow double" tilmaame u muuqataa, kaliya jiidi in ay jar in dhererka kasta oo aad rabto. Si aad u kala videos dhowr qaybaha, kaliya ciyaaro aad Video video, jiidi bar slide uu furmo kulanka xiisaha leh ee ay u meel aad u jeclaystay, guji "hako", ka dibna waxay doortaa "kala", aad video waxa loo qaybin doonaa laba qaybood.
Dalagyada, isku beddesha, Flip, Dheellitir dhalaalka, Speed, iwm
Double guji video clip ah, ama guji image Edit ku toolbar ah si ay u helaan suuqa kala edit ah. Wax kasta oo aad rabto in aad, kaliya aad u hesho qalab saxda ah ee aad gacanta, oo ay ku jiraan video tafatirka (dalagga, isku shaandheyn, flip, xawaaraha, dhalaalka, bedelkeeda, saturation) iyo tafatirka audio (mugga, libdhi gudaha / dibedda, garoonka, iwm).
Ku dar horyaal, Raadka, PIP, guurka, Intro / Credit, Voiceover, iwm
Laga soo bilaabo shaashada ee kor ku xusan, waxaa laga yaabaa in aad hore u arko in hawlaha video Jadwalka ku salaysan oo dhammu waxay yimaadeen sida ugu fudud ee ay tahay oo dhan ay leeyihiin feature jiitaa-n-dhibicda.
Si aad u astaysto horyaalka, jiididda iyo hoos u template horyaalka ah in booska aad rabto in ay kor u muujiyaan oo astaysto.
Si aad u codsato saamaynta, ka soo xusho 50 + saamaynta video, waxa ay doortaan iyo codsan in aad sawiro / videos goobtii.
Si aad ku dari PIP, ee ka dooro mid ka template ama ururinta sawir gaar ah oo jiita in Timeline PIP ah. Halkan, sidoo kale si fudud waxaad samayn kartaa Picture-in-Picture saamayn.
Si aad ku dari kala guurka, jiididda iyo hoos u template kala guurka ah si ay u video / sawirka, midig ama guji in ay khuseeyaan dhammaan.
Si aad ku dari Intro / credit, soo qaado template aad la doonayo, waxaa jiidi u dhexeeya laba clips kasta.
Oo waxyaalahaas oo dhan, iyadoo taasi Video editor for Windows 8, wax walba waa uu watay. Haddii aad rabto in aad si ay u qoraan Sheeko in videos ah, riix "Record" button oo taga, waayo.
Talaabada 3: dhoofinta aad masterpiece iyo wadaagto caalamka oo dhan ka
Video editor for Windows 8 ka dhigaysa wax walba u fududahay in ay dhoofin aad abuuray Video videos. Riix Abuur on xaq dhexe ee suuqa kala barnaamijka, waxaad heli doonaa fursado badan.
Waxaad dooran kartaa qaab video for loo maqli haboon ee computer ama qalab, ama Upload video in YouTube, iyo sidoo kale fariin u diraya optional in Facebook iyo Twitter ah. Ama xitaa gubi file in si DVD ah. Waa arrin aad u fududahay in la isticmaalo iyo waxa uu leeyahay tayo wanaagsan wax soo saarka.
Waa intaas! Fudud oo u baahan aan wax badan oo ah xirfadaha tafatirka, sax? Iska bilaabay in ay xaalkaa kuu gaar ah videos in Windows 8 hadda!